Kedu ụdị igwe ojii na njirimara ha | Netwọk Mgbasa Ozi
Ile anya n’elu igwe ma hụ igwe ojii bụ ihe a na-ahụkarị. Igwe ojii abughi nani mmiri ozuzo na oke mmiri ozuzo, mana ha nwere ike inye anyi ihe omuma banyere ihu igwe. Enwere dị iche ụdị igwe ojii na mbara igwe na onye ọ bụla nwere dị iche iche e ji mara na ọzụzụ ọnọdụ. N’isiokwu a anyị ga-amụ ụdị igwe ojii dị iche iche, ihe ha pụtara na ihe kpatara ha jiri mepụta.
You chọrọ ịmụtakwu banyere ụdị igwe ojii? Nọgide na-agụ ma ị ga-achọpụta ihe niile.
1 Olee otu igwe ojii si apụta
2 Igwe ojii
3 Igwe ojii
3.2 Akwa Stratus
4 Igwe ojii
5 Igwe ojii vetikal mmepe
5.1 Igwe ojii Cumulus
Olee otu igwe ojii si apụta
Tupu anyị amalite ịkọwa ụdị igwe ojii anyị ga-akọwara ha otu ha si adị. Maka igwe ojii n’eluigwe, ikuku ga-ajụrịrị. "Mkpịsị" na-amalite site na Anyanwụ. Mgbe ụzarị anyanwụ na-ekpo elu ụwa, ha na-ekpokwa ikuku gburugburu. Igwe ikuku dị elu na-adịwanye ntakịrị, yabụ na ọ na-ebili ma ikuku na-ajụ oyi, na-anọchi ya. Ka ị na-arịgo na elu, gradient gburugburu ebe obibi na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ dị ala. N'ihi nke a, ikuku na-ajụ oyi.
Mgbe ọ rutere oyi oyi nke ikuku, ọ na-abanye na vepo mmiri. Anya mmiri a enweghị ike ịhụ alụlụ mmiri a, ebe ọ bụ na ọ nwere mmiri mmiri mmiri na akpụrụ mmiri. Mpekere ndị ahụ pere mpe nke na enwere ike ijide ha n'ikuku site na ntakịrị ntakịrị mmiri.
Ihe dị iche n'etiti usoro nke ụdị igwe ojii dị iche iche bụ n'ihi okpomọkụ odide. E nwere igwe ojii ụfọdụ na-etolite na okpomọkụ dị elu ma ụfọdụ dị ala. Alalata usoro a kpụworo, “igwe ojii” ga-adị ka igwe ojii. E nwekwara ụfọdụ ụdị igwe ojii na-enye mmiri ozuzo na ndị ọzọ na-adịghị.
Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị oke ala, igwe ojii nke na-akpụ ga-emejupụta kristal ice.
Ihe ọzọ na - emetụta igwe ojii bụ ikuku. Igwe ojii nke emere mgbe ikuku zuru ike na-aputa n'igwe ma obu na strata. N'aka nke ọzọ, ndị nke a kpụrụ n'etiti ikuku ma ọ bụ ikuku nke nwere ebili mmiri siri ike na-eweta ọkaibe dị elu. Emekarị nke ikpeazụ na-akpata mmiri ozuzo na oké ifufe.
Anyị ga-amata ọdịiche dị iche iche nke igwe ojii dị iche iche dabere na ịdị elu nke ha na-etolite.
Ha bụ igwe ojii na-acha ọcha, uzo ma na-enweghị onyinyo n'ime. Ha pụtara dịka “ọdụ ịnyịnya” ama ama. Ha abụghị naanị igwe ojii nke mebere kristal kristal n'ihi ịdị elu nke ha nọ. Ha dị ka filaments ndị pere mpe, ndị nwere nkesa karịa ma ọ bụ karịa na usoro nke usoro ndị ọzọ.
Enwere ike iji anya gbapụ na-ele anya na mbara igwe ma hụ ka ọ dị ka agbachapụrụ ihu igwe na ahịhịa ahịhịa. Ọ bụrụ na igwe ojii gbara gburugburu na mbara igwe niile, ọ ga-abụ na elekere 24 na-esote ga-enwe nnukwu mgbanwe ihu igwe. Ke ofụri ofụri, ha na-abụkarị mgbanwe nke mbelata na okpomọkụ.
Igwe ojii ndị a na-etolite oyi akwa na-aga n'ihu nke nwere ihu ndọlị ma nwee ọdịdị gburugburu dị ka a ga - asị na ha bụ obere flakes owu. Igwe ojii na-acha ọcha kpamkpam n’enweghị onyinyo ọ bụla. Mgbe elu igwe gosipụtara kpuchie ụdị igwe ojii a, a na-asị na ọ na-agwụ ike. O yikwara ka ùzù aturu.
Ha na-apụtakarị n'akụkụ igwe ojii cirrus na gosi na ihu igwe na agbanwe site n’ihe dika elekere iri na abuo. Mgbe ha pụtara, oké ifufe na-ebukarị ụzọ. O doro anya na ha anaghị egosi otu ihe mgbe niile. Ọ bụrụ otu a, ihu igwe na amụma ihu igwe ga-adị mfe karịa.
Ha yiri ka ha na-ele ya anya nke mbu dika ihe nkpuchi nke o siri ike ịmata ihe ndi ozo. Mgbe ụfọdụ, a pụrụ ịhụ nsọtụ ka ha dị ogologo ma dịkwa obosara. A na-amata ha n'ụzọ dị mfe n'ihi na ha na-eme ka mbara igwe dị gburugburu ma anyanwụ ma ọnwa. Ha na-emekarị cirros Cloud ma na-egosi ajọ ihu igwe ma ọ bụ ụfọdụ ọkpọiso na-ekpo ọkụ.
N'ime ụdị dị iche iche nke igwe ojii dị n'etiti anyị hụrụ:
Ha bụ igwe ojii na-adịchaghị mma ma nwee ọdịdị adịghị mma. Igwe ojii a na-eweta flakes na ripple n'akụkụ ha dị ala. Altocumulus gosi na ihu ojoo n’abia ma ọ bụ site na mmiri ozuzo ma ọ bụ oké ifufe.
Ihe ndị a bụ igwe ojii nwere obere mkpa na ụfọdụ ebe ndị nwere ọnụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, a pụrụ ịhụ anyanwụ site na mkpuchi igwe ojii. Ọdịdị dị ka ntụpọ oge ụfọdụ. Ha na-enye ezigbo mmiri ozuzo n'ihi dobe na okpomọkụ.
Ha kacha nso n’elu. N'ime ha anyị nwere:
Ha na - aputa ihe mgbe nile na oji ndi oji ndi nwere otutu opacity. Ọ bụ n'ihi njupụta dị iche na igwe ojii niile. Ha bụ ihe atụ nke oge opupu ihe ubi na udu mmiri. A pụkwara ịchọta ha na mmiri ozuzo n'ụdị nieve.
Ha bụ ndị nwere undulations yiri nke elongated cylinders. Ha nwekwara ụfọdụ agba agba na agba ntụ dị iche iche. Ọ bụ obere na ha na-eweta mmiri ozuzo.
Ọdịdị bụ nke ahịhịa awọ na-enweghị ike ịhụ ụlọ akọwapụtara nke ọma. Ọ nwere ụfọdụ buttresses nke dị iche iche degrees nke opacity. N'ime ọnwa oyi, ha na-enwe ike ịtachi obi kwa ụbọchị, na-eme ka ọdịdị ala ahụ dịkwuo njọ. Mgbe oge opupu ihe ubi rutere, ha na-apụta n'isi ụtụtụ ma gbasasịa n'ehihie. Na-egosi ihu igwe dị mma.
Igwe ojii vetikal mmepe
Ndi a bu igwe oji nke n’etinye oke ogo na mmiri ozuzo.
Igwe ojii Cumulus
Ha nwere odidi anya na onyinyo doro anya, rue n’ichechi anwu. Ha bụ urukpuru ojii. Ntọala ya dị larịị, mana akụkụ ya dị elu nwere nnukwu mmegharị. Igwe ojii Cumulus kwekọrọ na ihu igwe dị mma mgbe enwere obere iru mmiri na obere ikuku ikuku. Ha nwere ike ime ka mmiri na mmiri ozuzo.
Ha bụ igwe ojii kachasị ukwuu ma dị oke egwu na-enwe nnukwu mmepe. Ha bụ agba ntụ na agba ma kpuchie anyanwụ. Ihe ndị a bụ ụdị ihe ndị na-eme mgbe ajọ ifufe na rụpụtara akụ mmiri igwe.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụta ịmata igwe ojii.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » Clouddị ojii
Ọ dị mma, na ngalaba nke obere igwe ojii ọ bụghị ezi, enwere atọ (site na enweghị mmerụ na ihe egwu) nke mbụ enwere cumulus nke bụ obere igwe ojii na-acha ọcha, mgbe ahụ enwere cumulonimbus (foto izizi) nwere agba ọcha n’elu na isi awọ n’okpuru, ha na-egosi mmiri ozuzo na ebili mmiri, ha dị oke egwu ma nwee nnukwu ice ice n'ime. N'ikpeazụ, torrecumulus (foto ikpeazụ) bụ nke kachasị dị ize ndụ na ọtụtụ ifufe na-arịgo ma na-agbadata.
Ọnye na -bụ Ricardo Ruiz? dijo
Na-efu foogu na oké ifufe?
Zaghachi Ricardo Ruiz
M na-eme mgbazi, na nkwupụta m gara aga m na-ekwu maka igwe ojii kwụ ọtọ, ndị ahụ nwere ntọala na ngalaba dị ala ma gbagoo na ngalaba ọkara. Igwe ojii Cumulus bụ naanị obere edemede na ebe ị na-ekwu obere igwe ojii bụ ngwakọta n’etiti igwe ojii dị ala na ọkara. Echere m na enyerela m aka
Daalụ maka ozi a dị egwu nyeere m aka maka ọrụ m bara uru practical na-ekelekwa na ozi a dị ezigbo mkpa ma nwee nghọta ọbụna na okwu siri ike
Zaghachi na NOA
Echere m na ọ dị oke mma na ha kesara ozi a dịka ọ na - enye isiokwu mkparịta ụka n’oge onye 😂😂
Daalụ maka ozi ahụ, ọ dị mma nke ukwuu, ọ nyeere m aka nke ukwuu !!! 😁😁